डा‍‍. केसीका माग आजसम्म पूरा नगरे देशभरका अस्पताल बन्द गराउने जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
डा‍‍. केसीका माग आजसम्म पूरा नगरे देशभरका अस्पताल बन्द गराउने
जनबोली/ १५ चैत, काठमाडौ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम आज सकिदैछ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग आइतबार साँझसम्ममा पूरा नगरे सोमबारबाट देशभरका अस्पतालका बहिरंग सेवा अस्पतालबाहिरै सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले २४ घन्टाभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरिका सरकारी, निजी अस्पतालका चिकित्सकले हातमा कालो पट्टी बाँधेर बाहिर अस्पतालको प्रांगणमा बिरामीको उपचार गर्ने बताए ।
चिकित्सक संघले शनिबार सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न १० बुँदे मागसहित आमरण अनसन बसेका डा. केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन पनि बढिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संगठन, नागरिक समाजका साथै पार्टीका शीर्ष नेता शिक्षण अस्पताल पुगेर केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन गरिरहेका छन् । प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठन अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघले पनि डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्वयबद्धता जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष डम्बर रावलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका हुन । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियाकरणको विरुद्धमा १० बुँदे मागहरु राख्दै सेवारत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी आईओएममा अनशन बस्नु भएको छ । यी जायज मागहरुप्रति हाम्रो संगठन अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ पूर्ण समर्थन र एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अनसन बसेको आठौं दिन आइतबार डा. केसीको स्वास्थ अवस्था बिग्रदै गएको छ । सरकारले शुक्रबार गठन गरेको टोलीसँग केसीले वार्ता गर्न नमानेपछि शनिबार दिनभर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसीको समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रम भएका थिए। शनिबार दिनभर शिक्षण अस्पताल हाताभित्र कवितावाचन, नाटक मन्चनलगायत कार्यक्रम भए ।